Filament extruding တွင် PBT resin ကိုအသုံးပြုခြင်း။
PBT monofilament သည် ကောင်းမွန်သော ခံနိုင်ရည်ရှိမှု၊ ပျော့ပျောင်းသော တွန်းအား နှင့် အရောင်ခြယ်ရလွယ်ကူခြင်းစသည့် ကောင်းမွန်သော ဂုဏ်သတ္တိများ ရှိသည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ PBT filament extruding machine line မှထုတ်လုပ်သော PBT monofilament ကို စျေးကွက်တွင်ကြိုဆိုပါသည်။1. ဆံပင်တု/ဆံပင်နှင့် မျက်တောင်ချည်မျှင် PBT သန့်စင်သော အစေး PET နှင့် အခြားပစ္စည်းများ ရောစပ်သည်..။
PET ချည်မျှင်နှင့် PP ချည်မျှင်တို့၏ လက္ခဏာများ
PET စုတ်တံ ချည်မျှင် သို့မဟုတ် PP စုတ်တံ အမျှင်များ ဘယ်ဟာ ပိုကောင်းလဲ၊ တစ်ခုစီရဲ့ ထူးခြားချက်တွေက ဘာတွေလဲ။ဤအရာနှစ်ခုစလုံးသည် စုတ်တံအမျှင်များအတွက် အသုံးများသော ကုန်ကြမ်းများဖြစ်သည်။PP အမျှင်များသည် အလွန်ကောင်းမွန်သော မာကျောသည့် ဂုဏ်သတ္တိများ၊ သိပ်သည်းဆနည်းသော၊ ရေစုပ်ယူမှုနည်းသော၊ အက်ဆစ်နှင့် အယ်လကာလီများကို ခံနိုင်ရည်ရှိသော်လည်း ...
PET PP တံမြက်စည်းချည်မျှင်ထုတ်ခြင်း ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း အီရန်သို့ တင်ပို့ခြင်း။
တရုတ်နိုင်ငံ၏ ရိုးရာပွဲတော်ဖြစ်သည့် နွေဦးပွဲတော်ကို နီးကပ်လာသောအခါတွင် အီရန်ဖောက်သည်များထံ အရောက်ပို့ပေးရန် စီစဉ်ခဲ့သည်။၎င်းသည် ပြီးပြည့်စုံသော PET PP တံမြက်စည်းဖိုက်ဘာ ထုတ်ယူခြင်းလိုင်းဖြစ်သည်။ဖောက်သည်များ၏ ထုတ်လုပ်မှုနှင့် အသုံးပြုမှုကို နှောင့်နှေးမှု မရှိစေရေး အတွက် ကျွန်ုပ်တို့သည် ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းကို ကြိုတင်ပြီး အရည်အချင်းပြည့်မီသော စမ်းသပ်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
ပလတ်စတစ်ပိုက်ထုတ်စက်၏ ဘေးကင်းရေး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု စည်းမျဉ်းများ အဆင့် ၂
10. စက်ကိုစတင်ပြီးနောက်၊ ခါးပတ်လွှဲသည် လိုအပ်သည့်အကွာအဝေးအတွင်းရှိမရှိနှင့် အခြားပုံမှန်မဟုတ်သောဖြစ်ရပ်များရှိမရှိကို ချက်ချင်းစစ်ဆေးပါ၊ သို့မဟုတ်ပါက ၎င်းကို ချိန်ညှိခြင်း သို့မဟုတ် ပိတ်ပစ်သင့်သည်။11. ဝါယာကြိုးဆွဲစက်နှင့် ဖုန်မှုန့်စုဆောင်းခြင်းကို စတင်ရန် တင်းကြပ်စွာတားမြစ်ထားသည်။
ပလတ်စတစ်ပိုက်ထုတ်စက်၏ ဘေးကင်းရေး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု စည်းမျဉ်းများ အဆင့် ၁
1. အော်ပရေတာတွင် ပလပ်စတစ်အမျှင်ထုတ်သည့်စက်၏လည်ပတ်မှုအတွက် အရည်အချင်းလက်မှတ်ရှိရမည်ဖြစ်ပြီး၊ အထောက်အထားမဲ့ဝန်ထမ်းများမှ စက်ကိုလည်ပတ်ခြင်းမပြုရန် တင်းကြပ်စွာတားမြစ်ထားသည်။2. အော်ပရေတာသည် သတ်မှတ်ထားသော စက်ကိရိယာများပေါ်တွင် ဖြစ်ထွန်းသော လုပ်ငန်းစဉ်များကို လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းသည်...
Shanghai International Brush Industry Exhibition
Shanghai International Brush Industry Exhibition သည် စုတ်တံလုပ်ငန်းကွင်းဆက်တစ်ခုလုံးကို လွှမ်းခြုံထားသည့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပြပွဲတစ်ခုဖြစ်သည်။၎င်းသည် ခေတ်မီ စုတ်တံထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းနှင့် ချောထည်ပစ္စည်းများကို အဓိကပြသထားသည်။အလွန်ကောင်းမွန်သော ကုန်သွယ်မှုနှင့် ဆက်သွယ်ရေးပလပ်ဖောင်းတစ်ခု။Shanghai Brush Industry Exhibition မှာ...
ပလတ်စတစ် စုတ်တံများကို နေ့စဉ်ဘဝတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုကြသည်။ပလတ်စတစ် စုတ်တံအမျှင်စက်ကို အမျိုးမျိုးသောရည်ရွယ်ချက်အတွက် ပလပ်စတစ်စုတ်တံများအဖြစ် ပြုလုပ်နိုင်သော ပလပ်စတစ် စုတ်တံ အမျှင်များ/ဖိုက်ဘာ ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ရန် အဓိကအသုံးပြုသောကြောင့် အလွန်ရေပန်းစားသည်။ပလပ်စတစ်စုတ်တံများကို အဓိကအားဖြင့် အောက်ပါ အမျိုးအစား ခွဲခြားထားပါသည်။ ...
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံ၏ ပလတ်စတစ်ချည်မျှင်စက်စက်လုပ်ငန်းသည် စျေးကွက်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ ကြီးထွားလာခဲ့ပြီး စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်၊ မြင့်မားသော ထိရောက်မှုနှင့် စွမ်းအင်ချွေတာရေး၊ ထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်သူများ၏ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ မြင့်မားသော အကြောင်းအရာများကို စဉ်ဆက်မပြတ် ပေါင်းစပ်ခဲ့သည်။ပလတ်စတစ်ချည်မျှင်စက် လုပ်ငန်းများ၏ လိုအပ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီသည်...
ပလပ်စတစ်ချည်မျှင် extruding စက်ဝက်အူ၏ဝတ်ဆင်မှုအတွက်အကြောင်းပြချက်
1. ပလပ်စတစ်တစ်ခုစီတွင် စံပြပလတ်စတစ်ဆားလုပ်ခြင်း အပူချိန်လုပ်ဆောင်ခြင်းအကွာအဝေးရှိပြီး၊ ၎င်းကို ဤအပူချိန်အကွာအဝေးနှင့် နီးကပ်စေရန် ပလပ်စတစ်ပိုက်ထုတ်စက်စည်၏ လုပ်ငန်းစဉ်အပူချိန်ကို ထိန်းချုပ်သင့်သည်။သေးငယ်သော ပလတ်စတစ်များသည် ဗူးခွံထဲသို့ ခုန်ပေါက်ဝင်ရောက်ပြီး အစာကျွေးသည့်နေရာသို့ ဦးစွာရောက်ရှိသွားသည်...
ပလတ်စတစ်ကြိုးလုပ်စက်များအတွက် ကုန်သွယ်မှုအခွင့်အလမ်းများ ပိုမိုရရှိစေပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ပလပ်စတစ်အမျှင်များ ထုတ်လွှတ်သည့်စက်လိုင်းကို နိုင်ငံများသို့ ပိုမိုတင်ပို့နိုင်ရန် အခွင့်အလမ်းများ ပိုမိုရရှိလာမည်ဖြစ်ပါသည်။2021 ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ 19 ရက်နေ့တွင် တတိယအကြိမ်မြောက် "Belt and Road" ဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာ စာတမ်းဖတ်ပွဲကို ပေကျင်း၌ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ရှီကျင့်ဖျင် တက်ရောက်ပြီး အရေးကြီးသော အမှာစကား ပြောကြား...
Angola ဖောက်သည်အတွက် PET တံမြက်စည်းချည်မျှင်စက်လိုင်းစမ်းသပ်မှုအသစ်
2021 ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ 1 ရက်နေ့တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်ဟောင်းအတွက် စက်လိုင်းအပြည့်အစုံကို စမ်းသပ်ပါသည်။ဤစက်လိုင်းသည် အသစ်ပြန်လည်အသုံးပြုထားသော PET ပုလင်းအမှုန်အမွှားများဖြင့် PET တံမြက်စည်းချည်မျှင်များ ထုတ်လုပ်ရန်အတွက်ဖြစ်သည်။အန်ဂိုလာ ဖောက်သည်သည် လွန်ခဲ့သည့်4နှစ်က တူညီသော စက်လိုင်းကို ဝယ်ယူခဲ့ပြီး ကြီးမားသော စျေးကွက် ၀ယ်လိုအားကို ပြည့်မီရန် သူ၏ လုပ်ငန်းကို ချဲ့ထွင်ရန်အတွက် မဟုတ်ဘဲ၊ သူဝယ်သည်...
PET PP တံမြက်စည်းအသစ်ဖြီးချည်မျှင်စက်လိုင်းစမ်းသပ်မှု
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အီရန်ဖောက်သည်အတွက် စက်လိုင်းစမ်းသပ်မှုအသစ်ကို ယခုလေးတင် ပြီးပါပြီ။ယခုအခါ PET PP တံမြက်စည်း ဖြီးချည်မျှင်စက်လိုင်းသည် နိုင်ငံများစွာတွင် ပိုမိုရေပန်းစားလာပါသည်။PET PP တံမြက်စည်း တံမြက်စည်း အမွေးအမှင်ပြုလုပ်သည့် စက်လိုင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုမ္ပဏီမှ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော အမျိုးမျိုးသော monofilament များကို ကုန်ကြမ်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်သည်...